Ny fampiharana mpamorona sary mihetsika maimaim-poana tsara indrindra (Rindrambaiko Desktop, Fampiharana finday ary sehatra an-tserasera) | Martech Zone
Ny rindrambaiko mpanamboatra sary mihetsika tsara dia mamela anao hampivelatra fampisehoana mahaliana na horonan-tsary miaraka amina fitaovana namboarina isan-karazany toa ny modely, ny feo, ny effets, ny famolavolana lahatsoratra sy ny endrika, sns. Ireo tahiry novokarina dia voatahiry amin'ny endrika samihafa toa. MPEG, MOV, .AVI na .MP4, sns. Ka noho izany dia azo idirana amin'ny sehatra hafa toa ny Android, iOS na solosaina izy ireo. Ireo fampisehoana ireo dia afaka manampy anao hanao fotoana manokana toy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fampakaram-bady tsy hay hadinoina, satria izy ireo no manome ny fomba tsara indrindra hanehoana ny fahaizanao mamorona. Afaka mahita rindranasa maro amin'ny Internet ianao amin'ny famoronana sary mihetsika ary amin'ity lahatsoratra ity dia tanisaiko ny 12 amin'izy ireo!
Fizarana 1: Top 4 Desktop Desktop Desktop Maker maimaim-poana
Ny fitaovana fanaovana sary mihetsika tsara indrindra voatanisa etsy ambany dia rindrambaiko mifanentana amin'ny Windows sy Mac. Ny fizotran'ny famoronana sary mihetsika misy sary dia tena mitovy: ampidiro aloha ny sary ary avy eo ampio audio / mozika, tahirizo ao anaty DVD na solosaina na zarao amin'ny media sosialy.
Wondershare Filmora dia tsy tonian-dahatsoratry ny horonantsary fotsiny fa ahafahanao mamorona sary mihetsika, na ho an'ny vao manomboka na ho an'ny matihanina. Izany rehetra izany dia manamora tokoa ny asa fampandrosoana ny horonan-tsary sy sary mihetsika amin'ny Windows sy Mac. Amin'ny maha fitaovana mamorona sary mihetsika miaraka amin'ny mozika sy ny tetezamita, ny sivana, ny overlay sns., Ny Filmora dia manolotra vokatra mihoatra ny 300 sy mozika manana zon'ny mpamorona 20 manana zon'ny mpamorona ahafahanao mamoaka ny fahaizanao mamorona.
Manohana ireo endrika fisie malaza rehetra io ary azo zaraina mivantana amin'ny sehatra media sosialy toa ny YouTube, Vimeo, sns.
Fomba maro no mahatonga ny fampiroboroboana ny fampisehoana ho tena mandaitra.
Fifanarahana intuitive amin'ny fitaovana mora ampiasaina.
Filmora dia manana trano famakiam-peo miorina izay manome fomba mozika sy vokam-peo isan-karazany
Izy io dia manana mozika, sivana, singa mihetsika, tetezamita ary overlay.
Ny endrika fisie malaza rehetra dia tohanana.
Ampidino mora amin'ny media sosialy.
Wondershare DVD Slideshow Builder fitaovana dia manome vahaolana matanjaka hamoronana sary mihetsika manankarena ilaina amin'ny filana matihanina. Ny mpampiasa dia afaka manambatra horonantsary sy sary mora foana miaraka amin'ny valin'ny 2D na 3D. Ny horonan-tsary azo zaraina dia azo zaraina avy hatrany amin'ny YouTube, iPod na TV.
Mora dia mora ny mampiasa an'io fitaovana io miaraka amina endri-javatra efa voafaritra mialoha.
Manolotra fanangonana sary, horonan-tsary ary endrika audio be dia be izy.
Ny fanovana dia azo ampiharina amin'ny media alohan'ny hampiharana ny famoronana farany.
Tsy mamela ny mpampiasa hizara fampisehoana amin'ny alàlan'ny mailaka na mivantana amin'ny CD interactive.
Freemake Video Converter rindrambaiko mety hamoronana fampisehoana haingana. Izy io dia mandamina ny fanangonana horonantsary sy sary tsara indrindra amin'ny fomba mahavariana indrindra ho an'ny Windows PC. Raha mila mampiditra sary marobe ao anaty sary mihetsika ianao, Freemake no safidy tsara indrindra ho anao.
Maimaimpoana tanteraka ary tsy mila fisoratana anarana.
Betsaka ny endrika fisehoana rakitra no tohana.
Io dia ahafahanao mampakatra mivantana ny tetikasanao ao amin'ny YouTube.
Azo afindra mivantana amin'ny DVD ny fampisehoana.
Tsy misy modely na modely hanombohana.
Efitra iray ihany no azonao ampiasaina ary tsy afaka mampiditra lahatsoratra amin'ny sary mihetsika ianao.
Windows's Movie Movie Maker mamela anao manampy ny fanangonana mozika, horonan-tsary ary sary tianao indrindra amin'ny sary mihetsika. Ny horonan-tsary dia azo raketina mivantana avy amin'ny webcam ary avy eo natambatra tao amin'ilay tetikasa. Mora tokoa ny mampihatra ny sary sy ny sary mihetsika.
Sehatra maivana sy mora ampiasaina.
Tetezamita marobe miaraka amin'ny effets visuels.
Manolotra endrika fizarana haino aman-jery sosialy mivantana.
Fampiasana voafetra raha oharina amin'ny fitaovana hafa azo eny an-tsena.
Izy io dia mahazaka endrika fisie voafetra.
Fizarana 2: Rindrambaiko an-tserasera maimaim-poana maimaim-poana
Ho an'ireo izay te-hamorona fampisehoana nefa tsy misintona rindrambaiko na mametraka rindrambaiko, dia nahita sehatra an-tserasera 3 MAIMAIMPOANA farafaharatsiny mamela anao hanao izany izahay.
4. Miseho kely
Miseho kely dia rindrambaiko tafiditra ao anaty haino aman-jery sosialy malaza izay mamela fizarana votoaty mora amin'ny tambajotra sosialy. Afaka manafatra horonantsary na sary avy amin'ny solo-sain'izy ireo ny mpampiasa na afaka miditra amin'ny haino aman-jery mivantana avy amin'ny sehatra media sosialy raha ilaina izany.
Afaka manao zavatra maro ankoatry ny fampiroboroboana fampisehoana tsotra fotsiny.
Izy io dia manana endrika fizarana maro mifototra amin'ny fiarahamonina.
Ny mpampiasa dia afaka manafatra rakitra haino aman-jery avy amin'ny sehatra media sosialy isan-karazany.
Ny horonan-tsary dia azo apetraka ho tsy miankina na ampahibemaso.
Manolotra safidy maro azo ekena ho an'ny tetezamita sy ny hafainganam-pandehan'ny sary izy io.
Tsy dia mora ampiasaina.
Ny horonan-tsary novolavolaina dia tsy azo sintonina.
FlexClip maimaim-poana 100% fa mbola manolotra fampiasa maro karazana ho an'ny mpampiasa rehetra. Tsy ilaina ny fampidinana, satria miasa an-tserasera miaraka amin'ireo anatiny rehetra fitaovana fampivoarana ny sary mihetsika. Afaka mampiditra horonan-tsary na mozika amin'ny sehatra ireo mpampiasa ary azo zaraina amin'ny sehatra media sosialy ireo rakitra aorian'izany.
Kizoa mpamoaka horonantsary malaza amin'ny Internet malaza iray hafa izay mamela ny fidirana mora amin'ny endri-javatra mahavariana tsy misy fisoratana anarana. Ny tonian-dahatsoratra mandroso dia manohana ny sarimiaina, ny tetezamita ary ny vokany ary manolotra safidy mozika marobe amin'ny famolavolana horonan-tsary mifampiresaka. Ny mpampiasa dia afaka manamboatra mora foana ny antsipirian'ny fotoana, ny faharetany, ny habeny na ny toerana sns, raha ilaina.
Fizarana 3: Fampisehoana sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny Android
Ny olona te-hamorona sary mihetsika miaraka amin'ny smartphone Android, dia afaka misintona ireto fampiharana mpanamboatra sary maimaimpoana manaraka ireto.
1. Tantara amin'ny sary
Tantara amin'ny sary afaka mamolavola fampisehoana sy sarimihetsika mahafinaritra amin'ny fomba mora amin'ny dingana telo. Mila misafidy sary avy amin'ny fitaovany fotsiny ireo mpampiasa, mamorona sary mihetsika miaraka amin'ireo tetezamita sy lohahevitra tadiavina, ary amin'ny farany mahangona na mizara arakaraka ny tsirony.
Betsaka ny sivana, sarimiaina ary dikanteny.
Manolotra valiny avo lenta.
Ny hafainganam-pandeha playback azo ahitsy araka ny filan'ny mpampiasa.
Sary voafetra ihany no azo voafantina.
2. PIXGRAM - sary mihetsika an-tsary
Pixgram dia fitaovana ahazoana aina, tsotra ary mahafinaritra izay afaka manangona ny sary rehetra miaraka miaraka hamorona sary mihetsika misy vokany mahavariana. Betsaka ny endri-javatra azo ovaina ho an'ny fanitsiana ny vokaranao.
Fizarana mora amin'ny sehatra media sosialy.
Tsotra ampiasaina amin'ny endri-javatra maro.
Manolotra fiasa sy vokany fanovana ifotony izy io.
FilmoraGO dia rindranasa finday izay manolotra traikefa be mpampiasa azo zakaina amin'ny interface mora ampiasaina. Mora tokoa ny manapaka horonantsary ary azonao atao koa ny manisy sivana isan-karazany amin'ny atiny miaraka amina lohahevitra efa voaomana marobe. Nahazo fiheverana manokana avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa ny FilmoraGo noho ny fananganana matihanina sy ny fitaovana fampandrosoana.
Manolotra fanangonana lohahevitra be dia be izy io.
Izy io dia manana vokatra mangatsiaka be dia be toy ny fihodinana, fihetsika miadana ary fihetsika haingana, sns.
Indraindray mandeha miadana miaraka amina rakitra be izy io.
Fizarana 4: Apps Maker maimaim-poana maimaim-poana ho an'ny iOS
Ankoatry ny fampiasana Apple iMovie hamoronana sary mihetsika amin'ny iPhone dia azonao atao koa ny manandrana ireto fampiharana maimaim-poana manaraka ireto mba hamoronana sary mihetsika amin'ny fitaovana iOS.
Ireo izay mila rindranasa hamoronana fampisehoana misy endri-javatra manan-karena sy intuitive ao amin'ny iPhone dia hahita ny Slide Lab fampiharana mahaliana. Tena mora ny manodina sary, mozika ary horonan-tsary amin'ny fampiasana ity fitaovana ity. Fanampin'izay, ny sary mihetsika amin'ny halavany rehetra dia azo ampitomboina amin'ny fomba mora.
SlideLab dia fitaovana mandroso, matanjaka ary mahaliana amin'ny fampivelarana sary mihetsika izay azo ampiasaina amin'ny filana matihanina sy manokana.
Fampiharana mahafinaritra sy mora ampiasaina.
Mora be ny manampy effets mahaliana.
Somary sarotra ny mandamina ny sary raha ilaina.
Ity rindrambaiko ity dia ahafahan'ny mpampiasa manambatra sary ao anaty sary, miaraka amin'ny tahan'ny endriny, ny habeny ary ny loko sns .. Mandeha dingana iray lavitra miaraka amin'ireo sivana mandroso izy io mba hamoronana sary mihetsika be dia be izay azo novolavolaina mora foana.
PicPlayPost mamela ny mpampiasa hisafidy gif, horonan-tsary ary sary, sns. Ho fampivelarana fampisehoana mahasarika.
Manolotra fiasa fampidirana video tsotra ho an'ny fampisehoana.
Ny filalaovana fitohizan-javatra sy ny fiaraha-mientana dia azo foronina miaraka amina endri-javatra tsy manam-paharoa maro.
Io dia ahafahan'ny mpampiasa mieritreritra ivelan'ny boaty miaraka amin'ny fandaminana horonan-tsary marobe.
Tsy manolotra fanohanana miorina amin'ny iCloud amin'ny famindrana na fitehirizana atiny anelanelan'ny fitaovana samihafa.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azontsika atao amin'ny solosaina dia ny famoronana fampisehoana an-tsary, izay ahodinkodinan'ny sary mitohy sy mandeha ho azy. Nasehonay anao ny tranonkala tsara indrindra hamoronana sary mihetsika sy sary ho hitanao amin'ny Internet, fa tsy mila mampiasa programa. Tonga izao ny fotoana hifidiananao ilay tianao indrindra ary hanombohana!
Tags: rindrambaiko fampisehoana sary an-tsaryfilmoragoflexclipfampiharana maimaim-poanampanao sary mihetsika maimaimpoanafree softwarempanova horonantsary freemakekizoaMicrosoftfampiharana sary mihetsika findaysehatra fampisehoana an-tseraserasary mihetsikatantara sarysarypicplaypostpixgramslidelabmisosa kelymiseho kely-tsaryfampiharana amin'ny sary mihetsikasehatra fampisehoana an-tsarylahatsary fanitsianaMpanamboatra sary mihetsika DVD dvdWonderhare filmora
DesignCap: Sariitatra manaitra endrika haingana ho an'ny orinasa, hetsika, haino aman-jery sosialy ary maro hafa…
13 Jun 2021 amin'ny 9:03 AM
Sammy misaotra anao tamin'ny lahatsoranao, mpanoratra mahay ianao tiako ny lahatsoranao, ary mampiasa fampiharana SlideLab mahafinaritra aho, mampiasa fampiharana Vimory koa aho hamoronana horonan-tsary mihetsika (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092). Mora ampiasaina ity rindranasa ity, UI / UX lehibe ary misy endri-javatra marobe.